Qodobbada iyo Xeerarka Gelitaanka E-Visa Hindida ah
In kastoo aad Hindiya uga tagi karto 4 qaabab kala duwan oo safar ah. diyaarad, tareen dalxiis, tareen ama bas, kaliya 2 qaababka gelitaanka ansax yihiin markaad ka soo gasho dalka e-Visa-ka Hindiya (Hindiya Visa Online) diyaarad iyo markab dalxiis.
Sida ku xusan sharciyada Socdaalka Hindiya ee fiisaha elektarooniga ah ama Fiisaha elektarooniga ah ee Hindiya, waa inaad ku soo gashaa Hindiya hawo ama markab dalxiis oo loogu talagalay garoomo diyaaradeed iyo dekado loo qoondeeyey haddii aad codsaneyso Dalxiiska e-Visa ee Hindiya or Ganacsiga e-Visa ee Hindiya or Caafimaadka e-Visa ee Hindiya.
Haddii aad haysato fiiso badan oo elektaroonig ah galitaan kadib waxaa laguu oggol yahay inaad ka soo gudubto garoomo diyaaradeed ama dekedo kala duwan booqashooyinka xiga.
Liiska garoomada diyaaradaha iyo dekedaha la fasaxay ayaa dib loo eegi doonaa dhowrkii biloodba mar, markaa iska hubi liiskan ku yaal degelkan oo calaamadee. Marka la eego go'aanka Hay'adda Socdaalka ee Hindiya, liiskan dib ayaa loo eegi doonaa waxaana lagu dari doonaa garoomo iyo dekedo badan bilaha soo socda.
Dadka fiisaha elektaroonigga ah ee tagaya Hindiya waxaa looga baahan yahay inay ka soo galaan waddanka 28 garoon diyaaradeed oo caalami ah Si kastaba ha noqotee waad ka bixi kartaa mid ka mid ah rukhsadaha Hubinta Socdaalka ee la oggol yahay (ICPs) ee Hindiya, oo noqon kara duulimaad, bad, tareen ama waddo.
Hoos waxaa ku qoran 28 Garoon diyaaradeed iyo 5 dekadood oo loogu talagalay e-Visa-ha Hindiya
Ama dekedahaas loogu talagay:
Haddii aad haysato fiisaha elektaroonigga ah waa inaad ka soo gashaa 1 ka mid ah dekedaha caalamiga ah ee kor ku xusan ama dekedaha badda. Haddii aad qorsheyneyso inaad mid kale la timaado dekedda gelitaanka, waxaa lagaa doonayaa inaad ka dalbato Visa joogto ah safaaradda ugu dhow ee Hindiya ama Gudiga Sare ee Hindiya.
Halkan guji si aad u aragto halkan liistada oo dhameystiran la fasaxay bixitaanka garoonka diyaaradaha, Dekedda iyo soo galootiga taas waa loo oggol yahay E-Visa Hindi ah (Hindiya Visa Online).
Fadlan dalbo Hindiya Visa ah 4-7 maalmood kahor duulimaadkaaga.
Codsiga E-Visa-ka Hindida